गरिबी निवारणका लागि सहकारी अभियान | चितवन पोष्ट
गरिबी निवारणका लागि सहकारी अभियान
अब २ दशकसम्म नेपालको गरिबी न्यूनीकरण प्रमुख एजेन्डा हो । सन् २०३० सम्म गरिबीको दर ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने भनिएको छ । त्यसैले, अबको १५ वर्षसम्म पनि गरिबी निवारणको एजेन्डा त आवश्यक छ । अहिले पनि २१.६ प्रतिशत गरिब छन् । २५ जिल्लाको गरिबी पहिचान गर्दा ४० प्रतिशत देखियो । अझै गरिबी न्यूनीकरणका लागि नेतृत्व गर्न सहकारी, गरिबी निवारण र स्वरोजगार आवश्यक छ । गरिबलाई सधैँ भत्ता बाँडेर मात्र हु्ँदैन, उनीहरुको क्षमता विकासको बाटो देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि संघीय प्रणालीमा संघसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । संविधानले चाहेको आर्थिक समाजवाद प्राप्त गर्ने एउटा औजार सहकारी हो । सहकारीमार्फत गरिबी न्यूनीकरण पनि दिगो हुन्छ ।
आजसम्म आइपुग्दा सहकारी अभियान बहुआयामिक भएको छ । आर्थिक विकास तथा सामाजिक रुपान्तरणको मार्गदर्शकका रुपमा मूलतः ग्रामीण नेपालमा सहकारी स्थापित हुँदै गएको छ । तसर्थ, सहकारी ग्रामीण गरिबको सारथि, महिला सशक्तीकरणको माध्यमका साथै सामाजिक समावेशिताको आयाम हुन पुगेको छ । गरिबी निवारण र स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई सहकारीसँग जोडेर लैजानुपर्छ । अब सहकारीहरु कार्यक्षेत्रअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत मातहतमा गएकाले उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । त्यसका लागि संघीय कानुनविपरीत नहुने गरी कानुन र नीति निर्माण गरी सहकारीलाई अगाडि बढाउन सक्छन् ।
दिगो विकासको स्थानीयकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ऊर्जा, उद्यमशीलता विकास, सामाजिक सुरक्षा र बिमा, आवास सहकारी, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाका साथै स्थान विशेष सेवा पहिचान र परिचालनमा सहकारीको भूमिका हुनुपर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्व, निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता, सहकारी क्षेत्रको परिपूरण र सामुदायिक क्षेत्रको सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । सहकारीले आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक रुपान्तरण र सांस्कृतिक समावेशीकरण गर्ने भएकाले पनि सहकारीको मह¤व बढ्दै गएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा सक्षम सहकारी हुनुपर्छ, त्यहाँबाट समृद्धिको ढोका उघ्रन्छ । सबै स्थानीय तह तथा जिल्लामा सहकारीको उपस्थिति भएकाले सोहीमार्फत आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीयरुपमा परिवर्तन ल्याउन सकिने छ । सहकारीले संघीय संरचनामा आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्छ । सहकारी विपन्नताका लागि गरिने होइन, विपन्न आफैँले गर्ने हो । संविधानमा समाजवाद उम्मुख अर्थतन्त्रको कल्पना सहकारीको आधारमा गरिएको छ, सोहीअनुसार संघीय शासनव्यवस्थालाई आर्थिकरुपमा सक्षम बनाउन सहकारीले मह¤वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि सहकारीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने अधिकार पनि प्रत्यायोजन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । तीनै तहका सरकारले नियमन गर्ने व्यवस्थासहित सहकारी संस्थाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने गरी कठोर नियमनकारी प्रावधानसहित संघीय सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ जारी गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले गत वर्षकै साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी तत्कालीन सबै सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु खारेज गरिसकेको छ । र, अहिले सहकारी संघसंस्थाहरुको संस्थापन र नियमनसम्बन्धी कार्य सबै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह, ७ वटा प्रादेशिक सरकार र संघीय सहकारी विभागबाट हुँदै आएको छ ।
स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएसँगै सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुने विभागको अपेक्षा छ । यद्यपि, अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन भएपछि अनियमितता बढ्ने त होइन भन्नेमा पनि सरोकारवालाहरु उत्तिकै चिन्तित छन् । हामीकहाँ सहकारीको संख्यात्मक विकास धेरै भएको छ । सहकारीको संख्या धेरै भयो, अब गुणात्मक विकास गर्न आवश्यक छ । सहकारीको संख्या घटाउनुपर्छ, यसका लागि ऐनमा एकीकरणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । गाउँमा सहकारीको सम्भावना छ, तर सहरमा बढी सहकारी छन् । कृषि सहकारीको आवश्यकता छ, तर बचत तथा ऋणमा केन्द्रित छन् । त्यसैले, अब सहकारी बढी भएको ठाउँमा एकीकरण गरी आवश्यकता भएका क्षेत्र र विषयमा सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । सहकारी संख्यात्मकरुपमा बढेसँगै विभिन्न खाले समस्या पनि देखिन थालेका छन् । आधुनिक सहकारी अभियान बचत तथा ऋणको साँघुरो धरातलबाट माथि उठेर सामाजिक उपयोगिताका क्षेत्रहरुमा विस्तारित हुनुपर्दछ । सहकारीको ध्येय मुठ्ठीभर सञ्चालकहरुको आर्थिक विकासको साधनभन्दा पनि समग्र सदस्यहरुको सामजिक र आर्थिक विकासको माध्यम बन्न सक्नुपर्दछ । यसका निम्ति सम्बन्धित निकायले अनुकूल वातावरण तयार परिदिनुपर्छ ।
सहकारी अभियान नै यस्तो सामूहिक व्यावसायिक संस्था हो, जसमा सबै सहभागीहरुको पुँजीको आधारमा होइन सहभागिताको आधारमा समान मताधिकारको हक र सुविधाको प्रत्याभूत हुने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेको सहकारीका ७ सिद्धान्तले सहकारी संस्थामा सहभागी समुदायमात्र होइन, वरपर रहेका सिंगो समाजप्रति नै सहकारीको दायित्वबोध गराउने प्रयास गरेको पाइन्छ । सामुदायिक सिद्धान्त, व्यवहार र अनुशासनलाई प्रजातान्त्रिक तरिकाले सदस्यहरुको भूमिकालाई प्राथमिकता दिइएको कारण नेपाललगायत विभिन्न मुलुकहरुका निम्न र मध्यम वर्गीय समाजमा सहकारी पद्धति लोकप्रिय रहेको छ ।
आज देशभर ३० हजारभन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारीहरु ४४ लाखभन्दा बढी सदस्यहरुसहित नेपाली सहकारी आन्दोलन लोकप्रियताका साथ एक उर्लंदो भेलका रुपमा अगाडि बढेको छ । यसर्थ पनि यो अभियान आन्दोलनलाई सही हिसाबमा अगाडि बढाउँदै देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा टेवा दिनु आजको चुनौती हो । नेपालमा सहकारीको चर्चा गर्दा बचत तथा ऋण सहकारीको दबदबा सहरबजारमा देखिन्छ भने कृषि तथा कृषिसम्बद्ध सहकारीको आकर्षण उपस्थिति तथा प्रभावकारिता ग्रामीण भेगमा बढ्दै गएको पाइन्छ । अन्य सहकारीहरु जस्तैः लघु उद्यम, जलविद्युत्, ग्रामीण पर्यटनलगायत सामाजिक उपयोगिता (स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाइ, सडक, सञ्चार आदि) जस्ता सहकारीको उपस्थिति तथा प्रभावकारिता हालसम्म नेपालमा उल्लेख्यरुपमा महसुस गर्न सकिएको छैन । हुन त, बहुउद्देशीय सहकारीको ब्यानरमा पनि सहकारीमार्फत बहुआयामिक क्षेत्राधारको सम्भावनाको मार्ग प्रशस्त गरेको भए पनि बचत तथा ऋणको कार्यलाई नै प्राथमिकतामा राखेका सहकारीको संख्यात्मक उपस्थिति पनि निकै दरिलो नै रहेको छ ।
सहकारी सिद्धान्त जति सुन्दर छ त्यसलाई सो हिसाबमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा या सम्बन्धित नियमन निकायको दृष्टि पुग्न नसक्दा त्यति नै बदनाम पनि बेलाबेलमा बन्न पुगेको छ । सहकारी एउटा अवधारणा र प्रारुप हो, तसर्थ सञ्चालकहरुले सहकारीको ऐन तथा विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गरेका सहकारीहरु सदस्यहरुको आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रुपान्तरणको दुईधारे प्रारुपका रुपमा जनतामाझ लोकप्रिय भएका छन् भने अन्यथा सहकारीका नाममा विकृति एवं ठगीका कारण बदनाम पनि हुन पुगेका छन् ।
सहकारीमा ऋण लिने तर पैसा नतिर्ने प्रवृत्ति छ । बैंकहरुमा गलत चेक जारी ग¥यो, कर्जा तिरेन भने त्यसलाई कारबाही सजिलै हुन्छ ।
सहकारीमा त्यस्तो छैन । सहकारीमा पैसा लिएपछि तिर्नैपर्दैनजस्तो एकथरी मानिसहरुको प्रवृत्ति छ, जुन ठगी हो । सहकारीको पैसा खाएर नतिर्ने दुई–चार महिना जेल बसेर मुक्त हुन्छ । अहिले त कस्तो वर्गीकरण गरिएको छ भने सहकारीमा एक करोड रूपैयाँ ऋण खाएर नतिर्नेलाई एक वर्ष, १० करोड खानेलाई तीन वर्ष तोकेको छ । सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसा लिएर नतिर्ने ठगहरुको पनि यसरी वर्गीकरण गरेर हुन्छ ? त्यस्ता गलत नियत हुनेले त एक करोड खान्छु र एक वर्ष जेल बस्छु भन्छ । ऋण नतिर्ने जोसुकैलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
सहकारीको भावना भनेको त सामूहिक जमानीमा समूहको हितका लागि लगानी गर्ने हो । त्यस्तै अर्को कुरा, सहकारीले ऋण लगानी गर्ने भनेको सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, लेखा समिति, कर्जा समिति सबैले निर्णय गरेर गर्ने हो । कुनै समस्या आयो भने अध्यक्षलाई मात्रै दोषी बनाइन्छ, यो पनि गलत हो । सरकारीलाई कसरी अघि बढाउने ? बैंकका रुपमा लाने कि सहकारीका रुपमा लाने भन्ने कुरामै अहिले समस्या देखिएको छ । सहकारीमा समस्या सञ्चालकहरुले जानी–जानी सिर्जना गरेका हुन् । कसैले ऋण खाएर हिँड्यो भने पनि सञ्चालकले गर्दा नै हो भन्ने चिन्तन छ । गलत नियत भएका एक–दुई अपवादबाहेक सहकारीका सञ्चालकहरुले आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठामा दाग लाग्ने गरेर आफ्नो संस्थालाई जानी–जानी धराशायी बनाउने काम गर्दैनन् । सहकारीमा अर्को विरोधाभास के छ भने धितो माग्दा सहकारी पनि बैंकजस्तो हुन थाल्यो भनिन्छ । मागेन भने किन धितो नराखेको भनेर सञ्चालकलाई दोषी देखाइन्छ ।
अर्को कुरा, एउटै संस्थामा धेरै सदस्य बन्ने कुरा छ जुन हटाउनैपर्छ । एउटै व्यक्ति १० ठाउँमा सदस्य बन्ने, सबै ठाउँबाट कर्जा उठाउने र कतै पनि नतिर्ने खालका विकृति हटाउन पनि एउटा व्यक्ति धेरै संस्थाको सदस्य बन्न नमिल्ने गर्नुपर्छ । अर्को, संस्थाको सदस्य बन्ने भए पुरानोबाट छोड्नुप¥यो । यो हुनासाथ सहकारीका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । सहकारीको भावनाअनुसार पनि एउटै व्यक्ति धेरैतिर सदस्य बन्न मिल्दैन । अर्र्कोितर पनि सदस्य भएको मान्छेलाई संस्थाले पनि आफ्ना सदस्यप्रति दिने सेवा र व्यवहार राम्रो हुँदैन । कसैले पेसागतरुपमा खोलिएको सहकारी वा फरक प्रकृतिको सहकारीमा फरक सेवा लिन सदस्य हुने कुरा छुट्टै होला, सहकारी सिद्धान्तले पनि त्यस्तो कुरामा रोक्दैन । तर, एउटै प्रकृतिको संस्थामा धेरैतिर सदस्य हुनुहुँदैन । यो कुराले सहकारीका सदस्यहरुको यकिन तथ्यांक पनि हुन सकेको छैन, दोहोरोपन भएको छ ।
सहकारी ऐनले ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थालाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा आधा घटाएको छ । तर, कर कार्यालयले कर ऐनमा नघटेसम्म मानेको छैन । अहिले सरकारले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै करका शीर्षकहरुलाई छूट सुविधा दिएको छ । तर, सहकारी जो स्थानीय मानिसहरुले सानो–सानो पुँजी संकलन गरेर समुदायको विकासका लागि काम गर्छन्, त्यसलाई निजी कम्पनीजस्तो व्यवहार हुँदै आएको छ । सहकारी भनेको बिहान–बेलुका दालभात खाएर बाँकी रहेको पैसा बचत गर्ने हो । सहकारीले न्यून आयस्तरका मानिसहरुको सानै भए पनि पुँजी बचत गर्नुपर्छ भन्ने बानी सिकाएको हुन्छ । मानिसको जन्मेदेखि मुत्युसम्मका सामाजिक समस्या समाधान गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई नाफामूलक कम्पनीजस्तो परिभाषित गर्ने काम भइरहेको छ । एउटा सहकारीलाई २०–२० प्रतिशत कर लगाउने कुराले यसको प्रवद्र्धन कसरी हुन्छ ! सहकारीकै सदस्यलाई चाहिँ १५ प्रतिशतभन्दा बढी नदेऊ भन्ने तर आफूले चाहिँ २० प्रतिशत धुतेर लिने कस्तो नीति होला राज्यको ?
त्यसो त, उपभोक्ताहरुलाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारबाट एक लाख रूपैँयाँ अनुदान लिँदै उपभोक्ता सहकारी पनि अस्तित्वमा आएकोमा सायद् अब केही भग्नावशेषबाहेक अरु लोप भए या हुँदैछन् । सायद् यस्ता लोपोन्मुख सहकारीहरुमा मूलतः राजनीतिक संरक्षण तथा पहुँचका आधारमा अनुदान पाउने सहकारीहरुको बाहुल्यता होला ! के सरकारले यो अनुदान उदारता एवं लोकप्रियताका निम्ति राजनीतिक उद्देश्यको लागिमात्र बाँडेको हो ? होइन भने उपभोक्ता सहकारीमार्फत सरकारले लिएको लक्ष्य कति हासिल भयो ? कति प्रतिशत जनता उपभोक्ता सहकारीबाट लाभान्वित भएका छन् ?
सरकार वा सम्बद्ध निकायसँग यसको लाभ लागतको लेखाजोखा छ ? कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अध्ययन भएको छ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर सहकारीको नियामक संस्थासँग सायदै होला ! यसले के पुष्टि गर्दछ भने सरकारले सहकारीमार्फत सामाजिक, आर्थिक विकासको दीर्घकालीन उद्देश्य सायद् लिएको छैन । यसले अन्ततः सहकारी अभियानलाई नै कमजोर बनाउँछ । यसतर्फ सहकारी आन्दोलनमा लागेका सम्पूर्णको ध्यानाकर्षण हुनु जरूरी छ । किनकि, सरकारी ढुकुटीबाट बाँडिएको रकमको लाभ प्रभावको विश्लेषण अनिवार्य हुनुपर्छ ।